Ronaldinho oo dib ugu soo laabanaya garoomada….(Goorma?) – Gool FM
Ronaldinho oo dib ugu soo laabanaya garoomada….(Goorma?)
(Brazil) 06 Maajo 2016. Goormaa kugu dambeysay macallinka goysmada, laacibkii hore ee xulka qaranka Brazil malaha ma dhawa, Ronaldinho ayaa goor dhow dib ugu soo laabanaya garoomada.
Laacibkii hore ee kooxaha Barcelona iyo AC Milan ayaa koox la’aan ah tan iyo September 2015 kaddib markii la soo afjaray heshiiskiisa kooxda Fluminense labo bilood uun kaddib markii uu ku biiray kooxdan ayaa dib ugu soo laabanaya garoomada dabayaaqada sanadkan.
Sanadihii yaraa ee la soo dhaafay ma ahayn kuwa u wacanaa Ronaldinho kaa oo loogu magac daray ‘Robaldinho’ maadaama uu dhacay mushaarka kooxdiisii hore ee Queretaro.
Saddex sano uu ku soo qaatay AC Milan kaddib waayihiisa Nou Camp, laacibkii hore ee ku guuleystay Ballon d’Or ayaa dib ugu laabtay dalkiisa hooyo gaar ahaan kooxaha Flamengo iyo Atletico Mineiro ka hor inta uusan aadin dalka Mexico 2014.
Inkastoo ay jireen warar sheeganaya in Ronaldinho uu ciyaaraha ka fariisanayo sanadkii la soo dhaafay, ayuu taa badelkeeda qallinka heshiis dheer ugu duugay kooxda Fluminense ka hor inta uusan soo gaabin waqtiga kooxdan sababo la xiriira dhaleeceymo kaga imaanayay taageerayaasha.
36-jirkaan ayaa lala xiriirinayay kooxo dhowr ah oo ay ka mid tahay Kabuscorp oo ka dhisan dalka Angola kuwaa oo dareensanaa inay ku dhow yihiin inay soo xiro galiyaan Ronaldinho ka hor inta uusan dib ugu laaban dalkiisa Brazil.
Kooxda reer Turky oo uu macallinka u yahay tababarihii hore ee Chelsea Jose Morais ayaa sidoo kale xiiseenayay xagaagii la soo dhaafay laacibkan ku guuleystay koobka adduunka inkastoo wakiilkiisa Roberto Assis uu aaminsan yahay u dhaqaaqis horyaalka MLS Mareykanka ama midka Shiinaha ay u badan tahay inay noqoto talaabadiisa xigta.